Home » Entries posted by Aamino Maxamad (Page 2)
Hadda ka hor ayaa Odayaal loo xulay inay gar go’aan ka gaaraan.Waxay isugu yimaadeen sida caadada iyo dhaqanku ahaa geed hoostiis. Geedka waxaa dhakada sare ka saarraa wiil yar oo…
February 1, 2013Comments Off on Aragtidaada ayaad ku aqoon tahay!Read More
Waxaa la yiri: “Dadku waa labo: WANAAGSANE iyo WANAAJIYE” malaha murtidu qaybteeda hore waxay ku daaban tahay maahmaahdii kale ee ahayd: “WEYNAADAA WANAAGSANAADA!” mid kale waxay leedahay: “TIISA DARYEELA TU…
January 16, 2013Comments Off on Aqoon yahan aragti ka arradan!Read More
“Jiftada: Ajar-diid” waxaan curiyey ka dib doorashadii ka dhacday dalka, ee ay ka horraysay xulidda Xildhibaannada iyo Guddoonka Baarlamaankaba. Xilligaa waxaa jirtay rajo xooggan oo dadka qabeen, dalkana ka muuqatay…
January 3, 2013Comments Off on Jiftada: Ajar-diidRead More
December bil murugo iyo gocosho badan!
Maalmuhu kala wanaagsan, dadkuna kala aayan wacan, shucuubtuna kala aayo hagaagsan, adduunkuna waa mareeg Maalmuhu ku dul wareegaan. Maalmuhu waxay isugu jiraan: qaraar iyo macaan, xun iyo wanaagsan, madow iyo…
December 6, 2012Comments Off on December bil murugo iyo gocosho badan!Read More
Afeef In kasta oo aan ogahay in aragtida koowaad ee cinwaankaa laga qaadan karo tahay: “MADAXTINIMO JECELAA!” amaba noqon karta meeshii laga dhihi jiray: “Habar fadhida Lagdan la fudud!”. Kaba…
November 10, 2012Comments Off on Haddaan madaxweynaha ahaan lahaa!Read More
“Qatar ma ahan qaylada dheer ee xadgudbayaasha, balse, waa aamuska xun ee dadka wanaagsan!” Martin Luther King, Jr (January 15, 1929 – April 4, 1968). Ku meel gaarkii waa laga baxay!…
October 6, 2012Comments Off on Xasuuqa dhacaya: shalay iyo maanta!Read More
Yaa yiri ISBADAL baa dhacay? Yaa yiri marxalad cusub baa la galay? Yaa yiri murankii waa laga gudbay? Yaa yiri Profyadan ayaa wax tari kara? Yaa yiri khilaafkii baa dhammaaday?…
October 1, 2012Comments Off on Muranka Madaxda DawladdaRead More
Tiro yar mise tub toosan?!
Muran iyo dood ka dib, Madaxweynaha iyo Wasiirka koowaad waxay soo bandhigeen tirada Wasiirrada ay ka koobnaanaysa Xukuumadda cusub, oo la isla gartay inay noqdaan toban Wasiir, markii horase dood…
September 30, 2012Comments Off on Tiro yar mise tub toosan?!Read More
Haddii wali Kala guurkii lagu jiro, maadaama aan wali la dhammaystirin dhismihii dawladnimo, maadaama aan wali la kala guran oo wali goradda la iskula jiro, lase yiri waxaa laga baxay ku meel gaarkii, sida la sheegay, aanse sidaa ahayn, aqriste,…
September 2, 2012Comments Off on Haraadigu yuusan kala harinRead More